Kushungurudza, kuvhiringidza, kudzvinyirira Nzira yekusimudzira mararamiro ehupenyu hwevana
Vana vana vaduku here?
Unhu hwemagariro evanhu chete hunobudirira mukukurukurirana nevamwe
Maitiro akanaka - achiri nyaya inokosha mune dzidzo?
Simbisai maitiro ehupenyu hwevana uye hutano hwevanhu - chii chinokosha?
Unyanzvi hwemagariro evanhu unyanzvi iyo vana vanofanira kutanga vatanga kudzidza. Hapana munhu anoberekerwa sehupenyu hwevanhu, naizvozvo kukurukurirana uye kudai maitiro akanaka emagariro evanhu chikamu chakakosha chekushamwaridzana nekudzidzira. Maitiro ehupenyu hwevana anotungamirirwa nevabereki uye nharaunda yehukama hwevana.
Kushungurudza, kugumbura, kudheerera? Nzira yekusimudzira maitiro ehupenyu hwevana
Munharaunda yedu sangano rinoshamwaridzana uye rinovaka rinodiwa. Munhu wese anotarisirwa kutevedzera kwete nemitemo chete asiwo nemitemo uye maitiro.
Unhu hwemagariro evanhu nehutano hwemagariro evanhu hunofanira kudzidziswa
Kana iwe usingaiti, iwe une matambudziko ekubata nevamwe vanhu uye iwe nokukurumidza unova mutorwa.
Nokudaro, inofanira kuva inokosha yechinangwa chekudzidzisa iwe somubereki kudzidzisa mwana wako mitemo yekutanga yekubatana kwevanhu. Pave paya, iwe uchabatsirwa mubasa iri nemasangano akadai setikartergart uye zvikoro.
Pakutanga, vacheche nevana vaduku vanongorongedzwa ivo pachavo. Vanoita nenzira yakamanikidzwa uye havagoni kugadzirisa zvido zvavo. Muchirevo ichi, vadzidzisi uye vatsigiri vezvematongerwo enyika vanotaura nezvekuita semwana.
Nokuda kwevana vaduku, nyika inotenderera pachayo.Asi izvi hazvina chokuita nekudyire: mwana muduku haasati adzidza kuziva zvido zvevamwe uye kuzvibata maererano. Mukuwedzera, haigone kuratidzira zviratidzo zvaro nemigumisiro yavo. Somuenzaniso, mwana ane makore maviri kazhinji haazive kuti ane mhosva yeimwe mhosva. Icho hachikwanisi kunzwisiswa kuti chinokonzera marwadzo kumunhu anotamba naye. Hana ine mutsika mupfungwa haisipo panguva ino.
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, chokwadi chokuti mutauro hausati wagadzirirwa zvakakwana senzira inonyanya kukosha yehupenyu hwekubatana. Dzidzo, kufambira mberi kwekunzwisisa, mafungiro uye kufambidzana kwevanhu pamwe chete nezvakaitika kune mumwe munhu mukubata nevamwe vana uyewo vanhu vakuru vanobatsira mwana wenyu kuti awedzere ruzivo rwemagariro evanhu.
Kuongororwa nekucherechedza kwevana zvakaratidza kuti maitiro ehutano anofanirwa kudzidziswa achiri muduku.
Unhu hwemagariro evanhu hunofanira kukurudzirwa
Vana vanokura mumasangano ega ega vanoona zvakaoma kubhadhara kusasha kwekudzidza kwehupenyu hwevanhu uye avo vanofambidzana gare gare mukukura kwavo.
Saka, zvakakosha kuti mwana wako atanga kufambidzana nevamwe vana. Semuenzaniso, shanyira boka rekutamba kana kuita chimwe chinhu nemhuri dzine ushamwari nguva dzose. Idzidziso yekudzidzira mwana wako yakakura uye iwe unayowo mukana wekutaurirana nevamwe vabereki.
Zvikwereti uye kindergartens zvakare zvinopa mupiro unokosha pakuuya kwekusimudzira hutano hwevanhu. Mwana wako anosangana nevana vazhinji vakasiyana apo uye anoziva kuisa zvavanoda kunze uye nekugadzirisa kusawirirana zvakanaka. Saka, uyai nomwana wenyu kuchikoro chekuchengetedza nguva dzose uye mubatsire vadzidzisi kusimbisa kushamwaridzana kwevanhu kuburikidza nekuomerera pakuteerera kumba.
Zvematongerwe enyika uye tsika dzakanaka dzaive pakati pezvinangwa zvakakosha zvekudzidzisa zvezvizvarwa zvekare. Asi aya maitiro anoramba achikosha nhasi here? Hungu, hukama hwakanaka hwevana hunokosha kupfuura kare.
Ichokwadi ndechokuti kukudzwa kunorevawo kuremekedza vamwe. Mukuwedzera, munhu wose anoda kuitirwa zvakanaka. Nokudaro, tsika dzakanaka dzichiri hurukuro kana iri pamusoro pehutano hwemagariro evanhu uye hutano hwevanhu.
Kana iwe uchikoshesa maitiro akanaka, unofanira kuratidza izvi kumwana wako kubva pakutanga. Maererano nehutsika hwavo, vana vanozvitsvaga kutanga kuvabereki vavo. "Kudzidza nemuenzaniso" ndiro izwi rinoshandiswa muzvidzidzo zvekudzidzisa.
Kurudzirai mwana wenyu kushandisa mazwi ekuremekedza akadai sokuti "Ndapota" uye "Ndinokutendai" uye zviite iwe kazhinji sezvazvinogona. Gare gare, unogona kutsanangura chikonzero nei zvakakosha kuva neruremekedzo uye ushamwari. Nokuti ndiani asingateereri mitemo yevanhu vomutambo, inofadza. Kushamwaridzana, kune rumwe rutivi, kunogona kuzarura magedhi emvura - zvose zvepamusoro uye zvega.
Pamusoro pezvose, vana vanoda kudzidza kudzidzira pakati pavo uye nevanhu vakuru. Kuti vaite izvi, ivo vanotanga kuisa mitemo yakawanda, yakadai sekugara kwevanhu kuti hutsinye hunenge husingadiwi. Vana vaduku havanganzwisisi zvinorehwa nechinangwa chemurairo uyu kusvikira vakwanise kunzwira tsitsi ne "vakamanikidzwa" uye vanoziva kuti ivo pachavo havadi kurohwa.
Ndinoita sei kana mwana wangu achiputsa zvinhu?
Saka, kana mwana wako ari kuedza kumanikidzira chiyero, somuenzaniso, saamai kana baba iwe unoda kupindira pakarepo uye kubvisa mamiriro acho ezvinhu. Udza mwana wako kuti amirire kana kuti ave nechimwe chido. Gare gare, unofanirwa kukurudzira mwana wako kutaura nemashoko kuti aratidze kukakavadzana, kutsvaga kupindira, kana kutsvaka rubatsiro kubva kuvanhu vakuru.
Kana iwe ukamisa mitemo yekushamwaridzana kwevanhu, iwe unofanirawo kuva nechokwadi chokuti yakanamatira. Izvi zvinotyisa, asi zvinokosha kuitira kuti mwana wako anzwisise zvaanoreva uye anonyatsoshandisa. Kana zvikauya kuzotadza kukanganisa, somuenzaniso, pakutamba nevamwe vana, unofanira kutora zvakasimba. Chiyero munyaya ino chingava chokuti mwana wako angasazokoka shamwari kwekanguva.
Zvakakosha kuti iwe unongoramba uchitaura unhu humwe usingaregereri uye uwedzere hukama, hukama hwevanhu nekutenda.
Zvatinogona kudzidza kubva kuvana vedu
Kugadzikana kwakanaka kwemarabhi - mhuka dzemhuka
Sei tichipisa kubva kune zvokudya zvinonaka? vana mubvunzo
Flag of Australia - Flags of all countries
Flag of Zimbabwe - Flags of all countries
Flag of Bulgaria - Flags of all countries
Flag of Denmark - Flags of all countries
Flag of Estonia - Flags of all countries
Flag of Gabon - Flags of all countries
Flag of Indonesia - Flags of all countries